Ukusebenza okuphezulu kwekhondidaka yomphunga yenkqubo yokubandisa ifriji / Inkqubo yeCold Chain / inkqubo yeHAVC - iShanghai Yubing Equipment Co., Ltd.
Iicooler ezivaliweyo zeSekethe- ukuhamba ngokuhamba
IiTowers eziPholileyo ezivaliweyo zeLoop- Ukuhamba okungumnqamlezo
Uyilo olwenziweyo lokupholisa iTowers-Uhlobo loxande
Uyilo olwenziweyo lokupholisa iiTowers-Uhlobo lwebhotile ejikelezayo
Imizi-mveliso yokuPholisa iMizi-mveliso yokuveliswa kwaMandla
Unyango lwaManzi e-RO
Amanzi amdaka noKwenziwa ngokutsha kwezinto ebesezisetyenzisiwe
Ukusebenza ngokuLungeleleneyo komphezulu womoya oShushu wefriji / Inkqubo yeCold Chain / Inkqubo yeHAVC
I-ZICE series condenser evaporative luhlobo lwezixhobo zokutshisa ubushushu eziphakamileyo ezilungisiweyo kwaye zaphuhliswa ngesiseko sokufumana itekhnoloji yokutshintshisa ubushushu ephambili kwihlabathi liphela.
I-condenser evaporative isebenzisa amanzi kunye nomoya njengesixhobo sokupholisa esiguqula iigesi zefriji ukusuka kwigazi ukuya kwimeko engamanzi. Umphunga oza kufuduswa ujikeleziswa ngekhoyili yokujiya, ehlale imanziwe ngaphandle ngenkqubo yokujikeleza kwamanzi kwakhona. Umoya ngaxeshanye uphephetheka phezulu ngaphezulu kwekhoyili, ubangela isahlulo esincinci samanzi asasazwe ngokutsha ukuba abe ngumphunga. Olu luphuma lususa ubushushu kwi-coil, ukupholisa kunye nokujiya umphunga okhoyili.
Aba matshini bafaneleke ngokukodwa kwiifriji zeshishini kunye neenkqubo zokubanda, ukuqinisekisa ukuthembeka, ukusebenza kakuhle kunye neendleko zokusebenza eziphantsi. Zice condensers zinezibonelelo zilandelayo:
Uyilo olulungele uMaintenI-ance:
Umnyango wokungena ogqithisileyo ubonelela ngokufikelela ngokulula kwiyunithi yangaphakathi yokuhlolwa kunye nokugcinwa kwemihla ngemihla.
Ukuhlolwa kunye nokuGcinwa ngaphandle kwexesha lokuPhumla:
Iqhude lebhola kunye nefilitha yokuhluza inokuhlolwa kwaye ilungiswe ngaphandle kokumisa ukusebenza kwezixhobo. Ngenxa yokuhamba komoya kunye nokuhamba kwamanzi ngendlela efanayo, iyakwazi nokuhlola kunye nokulungisa imilomo kunye nekhoyili ngexesha lokusebenza.
UkuSebenza kweNkqubo ePhakamileyo ngeNdleko eziSebenzayo zokuSebenza:
Itekhnoloji yokuhamba okuhlanganisiweyo yonyusa ukusebenza ngokukuko: inkqubo esezantsi yokunciphisa ubushushu ngalo ndlela inciphisa amandla e-compressor, okonga ukuya kuthi ga kwi-15% yamandla xa kuthelekiswa neenkqubo ezipholileyo zomoya opholileyo.
Ukukhetha okufanelekileyo kakhulu kwizicelo ezikhulu:
Ixabiso eliphantsi kakhulu lobunini, iindleko zokufaka ezantsi, kunye nolwakhiwo olulungileyo lokukhulisa indawo ngokudibanisa i-condenser yendabuko, inqaba yokupholisa, ukujikeleza kwempompo yamanzi, isitya kunye nemibhobho edibeneyo.
I-ZICE evaporative condenser ihambisa ukusebenza ngokukuko kwiyunithi elula yokugcina ngenxa yokuba itekhnoloji yelungelo elilodwa lomenzi inciphisa ukubizwa kwefriji, unxibelelwano kunye nobunzima bezixhobo, kuthintela umngcipheko wesikali kodwa okwangoku ukufikeleleka kolondolozo, ubhetyebhetye kunye nokusebenza kwenkqubo yofakelo kwandisiwe kwaye yiyo loo nto ibizwa ngokuba ubuninzi bemodeli.
INKQUBO YOKUPHOLISA I-ICE
Njengezixhobo zakho zokupholisa kwimizi-mveliso kunye nezisombululo ezifanelekileyo ezinxulumene nonyango lwamanzi, siyaqonda ukuba iinkonzo eziphendulayo nezithembekileyo emva kokuthengisa zibalulekile kuwe, siya kusebenza kunye nawe kumjikelo wobomi opheleleyo besityalo sakho kunye nezixhobo zokuqinisekisa ishishini elihlala lihleli. impumelelo.
Igumbi 392, No. 698, Lane 1588, Zhuguang Road, Shanghai, China
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, qiniseka ukushiya imiyalezo ngolwazi oluthe kratya malunga nenkqubo yenqaba yokupholisa kunye nezisombululo zonyango lwamanzi.